Fiberglass varavarankely fanamboarana lamba tampina - China Wuqiang County Huili Fiberglass
Fiberglass varavarankely efijery fanamboarana tampina
Fiberglass varavarankely fanamboarana lamba Patch hoe koa Fiberglass Screen fanamboarana Kit, Self Hazokely Screen Patch, fanamboarana lamba Patch, fiberglass tombantombana ny Patch.
Adhesive nanohana fiberglass tampina ampiasaina hanamboarana lavaka sy ny ranomaso amin'ny varavarankely efijery na efijery varavarana. Tsy misy fitaovana ilaina. 5 Pack Material: Fiberglass Color: Arina Self miraikitra efijery fanamboarana Patch Vokatr'izay: 3 "Ambainy: 3" ampiasaina mba hanamboarana lavaka sy ny ranomaso amin'ny varavarankely efijery na varavarana lamba No fitaovana ilaina. Carded.
Ahoana no manamboatra ny rovitra efijery
1: Hetezo ny lavaka
Hetezo ny efamira lavaka manodidina ny baomba mampiasa straightedge sy ny antsy maranitra ny ilàna. Tandremo ny lavaka kely araka izay azo atao, ary hiainga amin'ny kely indrindra 1/2 in. Fahiny lamba akaikin'ny filanjana ny vy.
2: Glue ny Patch
Hetezo ny damba ny fiberglass ahantòny izay am-pofoany 1/2 in. Ny sisin'ny tsirairay. Lay taratasy savoka eo ambany varavarankely lamba mba hitandrina ny lakaoly tsy mifikitra amin'ny workbench. Mampifantoka ny damba noho ny lavaka, hampihatra ny Bead ny lakaoly manodidina ny lavaka, ka namelatra ny lakaoly ny alalan 'ny Patch sy ny varavarankely lamba mampiasa hazo fisaka tapa-kazo.
Raha toa ianao leo ny moka naresaka manodidina ny lohanao sy ny fitandremana anao hifoha mandritra ny alina, ahoana ny manamboatra ny lamba? Patches dia ho hita sy afaka mijery kely tacky, ka raha ny ranomaso no lehibe, na ny varavarana lamba dia ao amin'ny faritra tena hita maso, hanoloana ny efijery iray manontolo. Raha tsy izany, ento 20 minitra sy marina izay vitany ny lavaka.
Raha ny lamba no fiberglass (izany Ho te lamba), 1/2 hividy ft. Fiberglass vaovao fitiliana ny horonan-taratasy eny amin'ny fivarotana, na ny fitaovana an-trano foibe, na mangataka vitsivitsy cutoffs madinika. Koa haka ny fingotra na ara-lakaoly na Super Glue Gel. Avy eo manaraka Sary 1 sy 2. Ny fanalahidin'ny mahafinaritra tarehy fanamboarana dia mihazona ny straightedge mafy manohitra ny workbench mba hahafahanao manao madio cutout (Sary 1).
Raha toa ka efa nahazo ny aluminium lamba amin'ny lavaka kely, mividy fitaovana Patch amin'ny fivarotana na ny fitaovana an-trano foibe. Ho ahitana precut maro 1-1 / 2-in. tampina amin'ny farango preformed izay hamehezany mivantana amin'ny efijery.